တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၆၆ နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေး ၊ ဆေးထိုးပြွန် အကူအညီများ ပေးပို့ထား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၌ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးပုလင်းများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးအကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးရန် နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ခိုင်မာစေရေး အားထုတ်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ဇွန် ၆ ရက်အထိ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၆၆ နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ နှင့် ဆေးထိုးပြွန်များ ပေးပို့ထားကြောင်း စီးပွား ကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့်အတူ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန(MOC)သည် ကာကွယ်ဆေးများအား လက်ခံနိုင်ငံများသို့ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူ Qian Chunying က ဇွန် ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၈ နိုင်ငံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၄ ခုအတွက် ကာကွယ်ဆေး အကူအညီလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Qian Chunying က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, June7(Xinhua) — China has completed dispatching COVID-19 vaccines and syringes to 66 countries and one international organization as of Sunday amid efforts to provide vaccine aid and strengthen international cooperation, according to the commerce ministry.
China is organizing and carrying out vaccine aid work for 88 countries and four international organizations, Qian said. ■
1.Photo taken on June 1, 2021 shows vials of the Sinopharm vaccine in Beijing, capital of China. (Xinhua)